Imithi yezinhlungu zokukhulelwa: Ngabe iTylenol noma ibuprofen iphephile ngenkathi ikhulelwe? - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa Umphakathi, Ukuphila Kahle Izilwane Ezifuywayo Ezokuzijabulisa Izindaba Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Ukuphuma Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izindaba
Main >> Imfundo Yezempilo >> Yimiphi imithi yezinhlungu ephephile ukuyithatha ngenkathi ukhulelwe?
Yimiphi imithi yezinhlungu ephephile ukuyithatha ngenkathi ukhulelwe?
Imfundo Yezempilo Izindaba Zomama
Ubuhlungu beqolo, ukugaya isisu, isisa semisipha, kanye namajaqamba emilenze-konke lokhu kuvamile okuhlobene nokukhulelwa Ubuhlungu nezinhlungu… njengoba noma ubani okhulelwe kungenzeka azi! Abesifazane abakhulelwe bangabhekana nezimpawu ezahlukahlukene kusuka ekuthambekeni kwebele kanye nasezinyameni zomlenze ku-trimester yabo yokuqala neyesibili kuye kwezingcindezi zeBraxton Hicks kwesithathu, futhi amathuba okuthi kwesinye isikhathi bazobe befinyelela kwikhabethe lemithi ukuze kutholakale ukuphumula kobuhlungu.
OKUSHIWO: Yimiphi imishanguzo ephephile ukuyithatha ngesikhathi sokukhulelwa?
Kuphephile yini ukuthatha imithi yezinhlungu ngenkathi ukhulelwe?
Ukuthatha umuthi wezinhlungu ngenkathi ukhulelwe kungaba yimbangela yokungaqiniseki, kodwa futhi kuyimithi ejwayelekile ebikiwe ethathwa ngesikhathi sokukhulelwa. Ngokuvumelana ne Izikhungo Zokulawulwa Kwezifo (CDC), abesifazane abangu-9 kwabangu-10 abakhulelwe babike ukuthi bathatha imishanguzo yezinhlungu ngesikhathi sokukhulelwa. I-CDC iyaxwayisa abesifazane abakhulelwe, noma abazama ukukhulelwa, ngokungasebenzisi imishanguzo ethile yezinhlungu futhi itusa ukuthi iziguli zithintane nomhlinzeki wazo wezempilo ngaphambi kokuthatha noma yimiphi imithi noma izithasiselo ngenkathi ukhulelwe. Kodwa lokho akusho ukuthi usuphelelwe izinketho zobuhlungu.
Yimiphi imishanguzo yezinhlungu okungcono ukuyithatha ngesikhathi sokukhulelwa?
Impendulo emfushane kunazo zonke ithi: thatha iTylenol ngenkathi ukhulelwe, hhayi ibuprofen noma amanye ama-NSAID.
OKUSHIWO: Ingabe iTylenol iyi-NSAID?
UTylenol ngenkathi ekhulelwe: Kuphephile
I-Acetaminophen, efana neTylenol, iyindlela ephephe kunazo zonke ongayithatha ngesikhathi ukhulelwe; kodwa-ke, thatha okuncane ngangokunokwenzeka esifundweni esifushane,uthi Soma Mandal , MD, umfundi oqeqeshwe ebhodini eSummit Medical Group eBerkeley Heights, eNew Jersey.
Abesifazane abathathe i-acetaminophen babencane amathuba okuthi babe nezinkinga zokuzalwa, kusho uDkt Mandal ngalolu cwaningo.
Ngenkathi i-acetaminophen kungaba yisidakamizwa ozikhethele sona lapho ufuna ukukhululeka kobuhlungu ngenkathi ukhulelwe, kusabalulekile ukufunda amalebula njalo uma uthenga umuthi.
Gwema imishanguzo ehlanganisiwe, ukuze ungagcini ngokuthatha umuthi ongadingekile noma umuthi oyingozi, kusho UDanielle Plummer, UFr.D., Umsunguli weHG Pharmacist. Isibonelo, i-Excedrin ine-acetaminophen kuphela kepha ine-aspirin ne-caffeine, ngakho-ke kuyigweme.
Thola isigqebhezana se-acetaminophen
kungakanani i-melatonin okufanele uyithathe ukulala
Ibuprofen ngenkathi ukhulelwe: Akuphephile
I-CDC ixwayisa ngabesifazane abakhulelwe abathatha imishanguzo engewona ama-steroidal anti-inflammatory (NSAIDs) -ofaka i-ibuprofen, kanye nama-opioid ngesikhathi sokukhulelwa-ngemuva kokwenziwa kocwaningo olwaxhumanisa lezi zinhlobo zemithi yezinhlungu nokwanda kokukhubazeka kokuzalwa.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwama-NSAID kwandisa amathuba okuphuphuma kwesisu okuzenzakalelayo, nge isifundo esisodwa ukusho ukuthi ukusetshenziswa kokubeletha kwama-NSAID kwandise amathuba okuphuphuma kwesisu ngo-80%.
UDkt. UPlummer noMandal bobabili baxwayisa ngokuthi ibuprofen kungaba yi-NSAID ethandwa kakhulu, kepha kuneminye imithi eminingi yezinhlungu okufanele igwenywe ngesikhathi sokukhulelwa. Lokhu kufaka phakathi:
OKUSHIWO: I-Acetaminophen vs. ibuprofen
Yiziphi ezinye izindlela zokukhulula ubuhlungu ngesikhathi sokukhulelwa?
Ngokuya ngohlobo nendawo izinhlungu ezikuyo, ngincoma ukuthi ngiqale ngokusebenzisa iqhwa noma ukushintsha iqhwa nokushisa, kusho uDkt. Plummer, oxwayisa ngokuthi ungalibeki ngqo iqhwa esikhunjeni. Uncoma ukusonga iphakethe leqhwa ngethawula, noma ukusebenzisa isikhwama sikaphizi ofriziwe noma umkhiqizo owenzelwe izinhlungu.
Ezinye izindlela ezinconywe nguDkt Plummer zifaka:
Okhilimu bokukhululeka nosizo (kodwa gwema imikhiqizo ene-menthol)
Ukugeza usawoti we-Epsom, kodwa ungawashisi amanzi
Lapho ikhwalithi yakho yempilo ithintekile, futhi izixazululo zemvelo zingayinqamuli, khona-ke i-acetaminophen iyindlela eyamukelekayo yokuphumula kobuhlungu ngesikhathi sokukhulelwa.
Thola isigqebhezana seTylenol
Hlala ukhuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngaphambi kokuthatha imithi ngenkathi ukhulelwe. ICDC futhi incoma iwebhusayithi eku-inthanethi UMamaToBaby njengomthombo osizayo onikezela ngolwazi ngezingozi zemithi komama abakhulelwe.
Ukuzinakekela Okungcono Kakhulu Kwabesilisa: Izinto Ezingu-25 Ezidinga Abafana
Abasokhemisi bangayithuthukisa kanjani impilo yamadoda
yini elungele umkhuhlane phezu kwekhawunta
kubiza malini udokotela nomshwalense
iyiphi iphilisi yokulawula inzalo elungele izinduna
ingabe i-depo provera ikwenza ukhuluphale
uyini umehluko phakathi kwe-humalog ne-novolog
yini into enhle kakhulu yokukhwehlela